QM: xoriyad ka xayuubinta Assange waa sabab la'aan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Julian Assange (t.v.) och Ecuadors ambassad i London (t.h.). sawir: Kirsty Wigglesworth/TT och Tim Ireland/TT
QM: xoriyad ka xayuubinta Assange waa sabab la'aan
Qareen Olsson: Waxay qasab ka dhigeysaa in la siidaayo
La daabacay torsdag 4 februari 2016 kl 12.22
Qaramada Midoobay ayaa sameysay baaritaan ay ku eegayso xoryadda laga qaadey mulkiilaha shabakadda Wikileaks Julian Assange, baaritaanka ayaa ku tilmaamay xoriyad ka qaadidda Assange mid sabab la’aan ah.
Natiijada baaritaan ayaa sabab u noqon karta in Assenge iska soo baxo guriga safaaradda guriga Ecuador ku leedahay magaalada London. Natiijada baaritaanka ayaa la filayey in ay soo baxdo berrito laakiin BBC ayey u suurogashay in ay horey u sii hesho macluumaadka ku xusan baaritaanka QM.
Julian Assange ayaa isla maanta ku qoray boggiisa Twitter ” Waxaan sugeynaa xaqiijin rasmi ah”.
Laakiin xeer-illaalinta Sweden ayaa ka gaabsatay ka hadalka arrimaha ku cusub kiiska Julian Assange.
– Waxaan ka hadli doonaa markii ay jiraan wax laga hadlo, oo aan helno natiijada baaritaanka. Sidaas waxaa yeri Karin Rosander oo ah afhayeenka hey’adda xeer illalinta mar ay la hadlaysay TT.
Haddii warka BBC dhab noqdo markas waxay dhinac u rogeysaa kiiska Assange, xataa haddii natiijada baaritaanka QM aysan aheyn mid ay qasab tahay in la raaco, sidaas waxaa yeri qareenka Julian Assanges Thomas Olsson.
– Dabcan arrintan cusub waxay qasab ka dhigeysaa in lagu noqdo kiiska soo xiritaanka Assange, maadaame horey xeer-illaalinta u sheegtay in xilligii Assange ku jiray saafaarad aan loo xisaabineynin sida in xoriyadda laga qaadey, taas waxay ka dhan tahay xeerka caalamiga ah, ayuu yeri Qareenka Sweden u jooga Assange.
Si haddaba assange xoriyaddiisa dib ugu helo waa in maxkmad Sweden ah wax ka badesho go’aankii horey loogu gaaray in la soo xiro, markasna waxaa meesha ka baxaya amarkii horey Yurub oo dhan loogu baahiyey ee ah in Ninkas Assange ah la soo qabto, boliska Ingiriiska waxay ku qasbanaanayaan in sii daayaan, ayuu yeri Qareen Olsson.
Assange markii la amray soo qabashadiisa waxuu ku dhuuntay safaaradda Ecuador ku leedahay London halkas oo ku sugnaa muddo saddex sanno ah, isagoo ka dhuumanaya in aan loo soo gacan-gelin dalka Sweden oo looga heysto eedeymo la xiriira kufsi labo haween ah.
Laakiin Assange ayaa ku doodaya in uu ka cabsi qabo Sweden in ay u gudbiso oo i gacan-geliso dalka Mareynaka.